News – Bandhiga
Wasiirka Arrimaha Dibadda Tukiga oo ballan qaad u sameeyay wiil Soomaaliyeed
Soomaaliya oo ka hadashay ciidan la sheegay iney u direyso Libya
Waxaa dhowaanahan la isla dhexmarayay in Soomaaliya ay ciidamo u direyso dalka Libya si ay u "caawiyaan" kuwa Turkiga. Xaaladda Libya ayaa sii xumaaneysa iyadoo dowladdo awood leh ay ku...
Xillgeen Joognaa hadda oo doorashadana aysan cadeyn xiligeeda iyo qaabkeeda?
Waa xilli uu gabaabsi yahay wakhtiga Baarlamaanka Federaalku. Weli xilli aan la goyn goorta ay dhacayso lana ogeyn qaabka ay noqoneyso doorashadu. Waa xilli labada Aqal ee Baarlamaanka iyo Madax...
Xasan Sheekh “Waa calaamad muujineysa dhaqan kelitalisnimo oo socda xariga Wariyaha”
Madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay xariga loo geestay Wariye Cabdicasiis Gurbiye oo kamid ahaa maamulka Goobjoog. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in hanaanka...
Ciidamo katirsan kuwa Booliska ee gaarka u ah barista Musuq-maasuqa ayaa xiray Agaasimaha Maaliyada Wasaaradda Caafimaadka Federaalka Soomaaliya Maxamuud Maxamed Buule sida ay sheegayaan xogo la helay. Agaasimaha Maaliyada Wasaaradda...
Soomaaliya oo deeq lacageed ku heshay kiisaska Coronovirus ee lasoo wariyay
Dowladda Mareykanka ayaa Khamiista maanta ku dhawaaqay in ay siin doonto Soomaaliya $ 7 milyan oo doolar oo wax looga qabanayo Xanuunka dillaaga ah COVID-19. “Dowladda Mareykanka waxa ay $...
Laacibkii hore ee kooxda Horseed FC ee horyaalka dalkeenna iyo xulka qaranka Soomaaliya Siciid Ducaale ayaa ku geeriyooday magaaladda Cadan dalka Yemen, halkaas oo uu ku xanuusanaa muddooyinkii ugu dambeeyay....
Madaxweyne Farmaajo oo cafis u fidiyay maxaabiis ku xirneyd xabsiyada dalka
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xoojinaya dadaallada ku aaddan ka hortagga cudurka Koroona ayaa Cafis Madaxweyne u fidiyey 148 maxbuus oo u xukunnaa dambiyo fudud. Madaxweynaha...
Wiil 13 jir ah oo Soomaali ah, oo laga helay coronavirus ayaa geeriyooday, sida ay sheegeen maamulka isbitaal ku yaalla magaalada London. Ismaaciil Maxamed Cabdulwahab, oo qoyskiisa ay daggan yihiin...
Wasaaradda Arrimaha dibada iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa caawa War-saxaafadeed ay arrinkan ka soo saartay ku caddeysay mowqifka dowladda, waxaana uu u qornaa sidatan: Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka...
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya ayaa gelinkii dambe ee Maanta waxaa la sheegay inay rasaas ku fureen Difaaca hore ee laga ilaaliyo Guriga uu Magaalada Muqdisho ka degan yahay...